Gacan ka hadal ka dhacay Garoon kubadeed ku yaala Masar oo sababay Khasaare nafeed – SBC
Gacan ka hadal ka dhacay Garoon kubadeed ku yaala Masar oo sababay Khasaare nafeed
Wararka laga helayo Magaalada Port Saciid ee Dalka Masar ayaa ku waramaya in inkabadan 74 qof ay ku dhinteen ka dib markii isku dhac gacan ka hadal ah uu dhexmaray Kooxo ka dhisan Wadanka Masar oo ay ciyaar ku dhaxmaraysay Garoonka Magaalada Port Saciid.
Saraakiisha Caafimaadka ee Dalka Masar ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin in tirade dhimashada ay sii kororto iyaga oo sheegay in dhaawacyada qaar ay qarka u saran yihin geeri kuwaasi oo qaba dhaawacyo halis ah.
Taageerayaasha Kooxaha AL-AHLI & ALMASRI ayaa isfarasaaray ka dib markii ciyaar aad u xiiso badan oo dhexmaraysay ay sababtay in ay faraha iskula tagaan tageerayasha labada dhinac.
Ciyaarta aya ku dhamaatay 3 iyo 1 oo ay guusha ku raacday Kooxda almasri taasi oo keentay inay caro xoog leh ka qaadaan kooxda alhali waxaana ka dib biloowday isku dhac aad u xoog badan.
Kooxaha taageerayaasha ayaa garoonka la soo galay Biro iyo Mindiyo Afbadan tasi oo kordhisay khasaaraha kala garay taageerayaasha Kooxaha AL-AHLI & ALMASRI waxaana dhacdadan ay noqoneysaa midi ugu khasaare badneyd ee abid kala gaarta taageerayaasha reer Masar.
Wasiir ku xigeenka Caafimaadka Dalka Masar Hesham Sheiha ayaa ka hadlay Warbaahinta Dalka Masar isaga oo tacsi u diray ehelada Asxaabtooda ay ku dhinteen dhacdadan naxdinta badan isaga oo sheegay in dowlada ay baaritaan dhab ah ku sameyn doonto sida ay dhacdadani u dhacday.